အိမ်မှာနေရင်းပေါ့ပေါ့ပါးပါးကစားလို့ရတဲ့ Work Out ဗီဒီယိုလေးကို တင်ပေးမယ့် အောန်ဆိုင်း - Cele Gabar
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းစူပါမော်ဒယ်လ်တွေထဲမှာ အောန်ဆိုင်းလည်းပါဝင်ပါတယ်။ အောန်ဆိုင်းရဲ့ကျစ်လစ်သွယ်လျနေတဲ့အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကလည်း လူပြောများတဲ့အချက်တစ်ခုပါပဲ။ ဒီလိုဘော်ဒီကြောင့်လည်း မိန်းကလေးအချင်းချင်းတောင်အားကျနေရတာပါ။
ဒီရက်ပိုင်းမှာကပ်ရောဂါကြောင့် အိမ်တွင်းအောင်နေကြသူတွေအများအပြားရှိမှာပါ။ အိမ်မှာနေတဲ့သူတွေအကျိုးရှိအောင်တော့ အောန်ဆိုင်းက ဗီဒီယိုလေးတွေတင်ပေးတော့မှာပါ။အောန်ဆိုင်းကတော့ “Hello! အိမ်မှာပဲ နေရင်း ဝိတ်လေးတွေ မသိ မသာ တက်လာတဲ့ ပရိတ်တွေ အတွက် အိမ်မှာနေရင်း ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားဖြစ်အောင်လို့ Awn Seng က ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ လိုက်ကစား လို့ ရအောင် Home Work Out Video လေး တစ်ခု လုပ်ထားတယ်! ဒီနေ့ ညနေ ၆ နာရီ တင်ပေးမယ်နော်! ဘယ်လိုလဲ လိုက်ကစားမှာ လား ပြောခဲ့ဦး ???” ဆိုပြီးတော့ ဖေ့ဘွတ်မှာပြောထားပါသေးတယ်။
လူတော်တော်များများကတော့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရမှာကို ပျင်းတတ်ကြပါတယ်။ အောန်ဆိုင်းကတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့လိုက်ကစားလို့ရမယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလည်းလွယ်လွယ်ကူကူလုပ်ရင်း ကျစ်လစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးရအောင်ကြိုးစားချင်တဲ့ သူတွေရှိလားနော်…
Source : AwnSeng